तराईका जनताको काखमा हुर्केको एमाले कसरी तराई विरोधी हुन्छ ? —सत्यनारायण मण्डल,स्थायी कमिटी सदस्य, नेकपा (एमाले) – Maitri News
तराईका जनताको काखमा हुर्केको एमाले कसरी तराई विरोधी हुन्छ ? —सत्यनारायण मण्डल,स्थायी कमिटी सदस्य, नेकपा (एमाले)
maitrinews November 14, 2016
नेकपा (एमाले) अहिले मधेस केन्दित अभियानमा सक्रिय बनेको छ । मुख्य गरेर एमाले मधेसविरोधी मनोवैज्ञानिक प्रभाव तोड्ने, सामजिक सद्भावको सन्देश दिने र चुनाव ‘मिसन’ अभियान लिएर एमाले तराई झरेको हो । करिब दुई सातादेखि तराईमा विभिन्न गतिविधि गर्दै आएको एमालेले जिल्लास्तरीय भेलादेखि, जनसभा र प्रशिक्षणहरु समेत गरेको छ । त्यति मात्र होइन एमालेका शीर्ष नेताहरु पनि अहिले त्यही अभियानमा तराईमा सक्रिय बनेका छन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, भलनाथ खनाल, महासचिव ईश्वर पोख्रेललगायतका पदाधिकारीसम्म अहिले तराईका अभियानमा सक्रिय बन्नुभएको छ । त्यसो त एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी एक मन्त्री हुनुहुन्थ्यो सत्यनारायण मण्डल उहाँ पनि अहिले एमाले नेतृत्वको सरकारले मधेसका जनताका लागि गरेको सकारात्मक कामको जानकारी दिन एमाले तराई झरेको दाबी गर्नुहुन्छ । उहाँ अहिले तराईमै रहेका बेला मैत्री न्युज डटकमसँग एमाले किन तराई झर्यो यसरी बेलिविस्तार लगाउनुभयो ।
नेकपा (एमाले) का शीर्ष नेतासहित दर्जनौँ नेताहरु तराई झरेका छन् । त्योसँगै एमालेले जिल्लास्तरीय भेलादेखि, जनसभा र प्रशिक्षणहरु समेत गरेको छ । यी सबै कुरा मधेसविरोधी मनोवैज्ञानिक प्रभाव तोड्ने एमालेको अभियान हो भन्ने छ नि ?
यो हाम्रो पार्टीको जीवनमा पार्टीलाई संगठित गर्ने, तल्लो तहका संगठन बलियो बनाउने नियमित अभियान नै हो । मधेसमा केही वर्षदेखि मधेसमा एमालेलाई घेराबन्दी गर्ने, मधेसविरोधी भएको भ्रम पैदा गर्ने जस्ता कुरा हुँदै आएका थिए । एमालेले ती आरोप र भ्रमलाई ठोस कार्यक्रम लिएर गएर भ्रम चिर्न सकेको थिएन । अहिले ती सबै भ्रम चिर्ने अभियानका रुपमा पनि हामीले लिएका छौँ । अहिले एमाले गाउँ–गाउँमा गएर एमालेलाई सुुसुचित गराएका छौँ । हामीले जहाँ–जहाँ कार्यक्रम गरेका छौँ । त्यहाँ–त्यहाँ हामीले विभिन्न भ्रमहरुलाई चिर्न सफल भएका छौँ । उहाँहरु मुक्त हुनुभएको छ र एमाले वेठिक होइन भन्ने मनोविज्ञान उहाँहरुमा परेको छ । यसलाई हामीले सफल ठानेका छौँ ।
भनेपछि एमालेलाई लाग्ने गरेको भ्रम अहिले तपाईँहरुले विस्तारै चिर्दै जानु भएको छ ?
हो, एमालेलाई लगाएका सबै आरोप झुट्टा थिए । एमाले हुर्किएको नै तराईका जनताको काखमा हो । त्यसैले तराईका जनताको काखमा हुर्किएको पार्टीलाई लगाएका आरोप अहिले हामीले चिर्दै आएका छौँ । हामी आदिवासी मधेसी हौं । किसान आन्दोलन मधेसकै भूमिमा भएको हो । त्यो आन्दोलनको अगुवाई कम्युनिष्टले गरेको हो । त्यो एमालेले गरेको हो । त्यसैले हामी ती भ्रमबाट डराउनु पर्ने केही छैन । पञ्चायती शासनमा एमाले लडेको हो । त्यसैले लोकतन्त्र र गणतन्त्र आएको यो बेला एमाले डराउनु पर्छ भन्ने मलाई लागेको छैन ।
अहिले अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई लिएर पनि एक प्रकारको भ्रम छर्ने काम भएको छ नि । यो सन्दर्भमा पनि एमालेले केही अभियान चलाएको छ, तराईमा ?
सरकारले अंगीकृत नागरिकले पनि राज्यको प्रमुख पद पाउने गरी संविधान संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको भन्ने चर्चा भयो । म पहिलादेखि नै यसको विरोधी हुँ । म अहिले पनि भन्छु यो आत्मघाती कदम हो । माओवादी, कांग्रेस सम्मिलित सरकारले मधेसी मोर्चासँग गरेको तीनबुँदे सम्झौता अनुरुप नै यो ल्याउने प्रयास भएको हो । यो फेरि पनि भन्ुछ, आत्मघाती छ । यदि यो खालको प्रस्ताव उनीहरूले ल्याउँछ भने उनीहरूले नेपाललाई उपनिवेशका रूपमा सहर्ष स्विकारेर भारत सरकारलाई तमसुक गरेको ठहर्छ । संसारमा कहाँचाहिँ अंगीकृतलाई राज्यको प्रमुख पद दिइएको छ ? अंगीकृतलाई राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख, सेनाप्रमुख, न्यायलयको प्रमुख बनाउन थाल्ने हो भने यो मुलुक रहिरहला ? त्यसैले, यहाँका शासकहरूले सोचून् । यहाँ मधेसका केही सामन्तहरू छन् । जो भारतबाट परिचालित छन् । सिंगो यहाँको पहाडे वर्ग जुन छ, उसले विभिन्न राजनीतिक दलको नाममा शासन चलाउँदै आएका छन् । त्यसैले, मधेसका सामन्तहरूले शासनको हक खोजेका हुन् । यसमा हाम्रो सहमति छैन । अंगीकृतवालालाई नेपालले नागरिकता दिएकै छ नि ? यति भै पुग्दैन । किन चहियो अरु ?
तर, उनीहरुले त सबै मधेसी जनताको माग हो, यो भनेका छन् नि ?
यी सब हल्ला हुन् । यसमा कुनै तुक छैन । मधेस आन्दोलनका नाममा जे माग उठाइएको छ, त्यसबाट १ प्रतिशत मधेसी जनताको पनि हकहित हुँदैन । यो सम्पूर्ण मधेसका सामन्तहरूको स्वार्थका लागि भइरहेको छ । अर्को मुख्य कुरा, यहाँका खस आर्यहरूले सोच्नुपर्ने हो, तर यिनीहरू किन चमचम गरिरहेका छन् ? पुष्पकमल दाहालले, शेरबहादुर देउवाले किन चमचम गरेको ? मैले बुझ्न सकेको छैन । लम्पसार हुनकै लागि कहिले प्रचण्ड, कहिले देउवा भारत गइरहेका छन् । कांग्रेसले किन बुझ्दैन ? ००७ सालदेखि ०१५ सालसम्म संक्रमणकाल रह्यो । ०१५ सालको चुनावमा कांग्रेसको दुईतिहाइ बहुमत आयो । बीपी कोइराला पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो । हामी वामपन्थी भएर पनि बीपीलाई सम्मान गर्छौं, तर त्यही कांग्रेसीहरू बीपीको अपमान गरिरहेका छन् । बीपी र मनमोहन त भारतको स्वतन्त्र सेनानी पनि हुन् । नेहरूले कहिले नेपालको लोकतन्त्रलाई साथ दिए ? कहिले बीपीका दाजु मातृकालाई उचाले, कहिले महेन्द्रलाई उचालेर ०१७ सालमा बीपीको सरकार मात्र होइन, लोकतन्त्रको पनि हत्या गरियो । बीपीलाई हतकडी लगाएर आठ वर्ष जेलमा सड्याए । जबसम्म बीपीलाई सड्याएनन्, तबसम्म उनीहरूले चैनको सास लिएनन् । यो कुरा नेपाली कांग्रेसका अहिलेका नेताहरूले किन बुझ्दैनन् ?
हामीले यसमा गम्भीर हुनुपर्छ । भोलि भारतको पन्जाब, उडिसा, राजस्थानको मान्छे हाम्रो मधेसमा आएर यहाँको नागरिकता लिएर व्यापार गरेर बस्दैमा ऊ राज्यको प्रमुख हुन योग्य हुन्छ ? भारतले १०–२० करोड रुपैयाँ खर्च गरिदिन्छ, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छ अनि भोलि उसले प्रधानमन्त्रीकै कुर्सीबाट नेपाल सरकारलाई भारतमा विलय गराएको निर्णय गराइदिन्छ । डिजाइन त त्यो न हो ।
भनेपछि अंगीकृतलाई राज्यको उच्च पदमा जान खुला छाड्नुपर्छ भन्ने तर्क सबै मधेसी जनताको होइन ?
हुँदै होइन, मैले अघि पनि भने । सांसद, मन्त्री बन्न त अंगीकृतलाई पनि छुट छँदै छ नि । त्यो अधिकार त दिइएकै छ नि । तर, प्रमुख बन्ने, किन बन्ने ? सबै भारतकै डिजाइनमा भइराखेको छ । अंग्रेज शासकहरूको जहाँजहाँ उपनिवेश थियो, त्यहाँ त्यहा मालिकहरू जाँदा कसरी जयजयकार हुन्थ्यो, त्यस्तै हो अहिले पनि । मालिकहरू आए, यहाँका शासकहरूले पनि लम्पसार परेर दण्डवत गरे, कुरा यत्ति हो । यो धर्तीका लागि लडेका हामी आदिवासी छौं । यो धर्तीको निर्माता राजाश्री जनक हुन् । ४० पुस्ता राज जन वंशले गरेको छ । भारत त अंग्रेजले बनाइदिए । त्यसैले सबै ढुक्क भए हुन्छ । एमाले अहिले पनि अंगीकृतवालाई राज्यको मुख्य पद दिनुहुँदैन भन्ने पक्षमा छ । अहिले गृहमन्त्रीले नै यो कुराको अगुवाई गरेको भन्ने सुनिएको छ । त्यो सत्य नहोस । हो गृहमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री मधेसी नै छन्, तर उनीहरू पटवारीजस्तै हुन् । मैले त नाम नै राखिदिएको छु, पण्डित, पटवारी र बाबुसाहेब । मधेस आन्दोलनले यी तीनवटा समुदायको मात्र हित गरेको छ । मधेसी जनताको हित गरेकै छैन । उहाँहरुले नै यस्ता कुराको अगुवाई गर्नुभयो भने उहाँहरु मधेसमा खोज्नु पर्ने अवस्था आउँछ । यस्तो नहोस ।
Previous Previous post: एक वर्षअघि बेपत्ता अल्ट्रालाइट विमानको भग्नावशेष फेला
Next Next post: Syria conflict: Assad hopes for ‘anti-terror ally’ in Trump